Yaa loo doortay Xubinimadii Gudiga dib u eegista Dastuurka 2 Aqal ee uu iska casilay C/raxmaan Faroole - Caasimada Online
Home Warar Yaa loo doortay Xubinimadii Gudiga dib u eegista Dastuurka 2 Aqal ee...
Yaa loo doortay Xubinimadii Gudiga dib u eegista Dastuurka 2 Aqal ee uu iska casilay C/raxmaan Faroole
Muqdisho (Caasimada Online)-Xildhibaanada Aqalka Sare ee baarlamaanka Somalia ayaa maanta doortay Xildhibaankii buuxin lahaa xubintii banaaneyd ee Guddiga dib u eegista Dastuurka ee Labada Aqal, kaddib markii uu xubintaas iska casilay Senator C/raxmaan Faroole.
Xubinimada ayaa waxaa isku soo taagay Ilaa afar musharax oo mid ka mid ay tahay haweeney, waxaana laga guuleystay Seddex musharax oo cod ahaan aad u liitay tirada ay heysteen.
Xubnaha isku soo sharaxay xubinta Guddiga dastuurka ayaa waxay kala yihiin:
1-Shukri Aadan Maxamed.
4-C/llaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag.
Senator C/llaahi Sheekh Ismaaciil ayaa helay 24 cod, halka Shurki Aadan Maxamed ay heshay 22 cod, wareegii labaad ee doorashada.
Senator C/llaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ah Xildhibaanada ayaa ugu danbeyntii ku guuleystay xubinimada Guddiga Dib u eegista Dastuurka ee Labada Aqal, kaddib doorasho ka dhacday Xarunta Aqalka sare.
Dhinaca kale, xubinta tartanka adag loo galay ayaa waxaa iska casilay Senator C/raxmaan Faroole oo looga guuleystay Guddoomiyaha Guddiga dib u eegista Dastuurka Labada Aqal.